Aiza ny CEG sy ny Lisea ?
Mahavariana ny trangan-javatra eto amintsika eto. Dradradraina ny hoe mila miady amin’ny fampiasana ankizy, amin’ny fanodikodinana zaza tsy ampy taona, ny fizahan-tany mamoafady kanefa misy lalana iray toa zary lasa tsinontsinona sy tsy manan-danja intsony ankehitriny : ny fanabeazana sy ny fampianarana izay.
Etsy an-daniny, sahirana mafy ny ray aman-dreny amin’ny fikarohana sekoly ampiaran-janaka. Mijery ny sitrany ahay ialana amin’ny saram-pianarana lafo be, kanefa rehefa afaka CEPE sy fanadinana idirana amin’ny taona fahenina ny zanany dia voatery mijanona tsy fidiny satria tsy ampy hono ny efitrano fianarana. Firifiry izany ireo ankizy no lasa mpiandry omby, mpiasa an-trano, mpirenireny satria tsy voaray hianatra eny amin’ny sekolim-panjakana ? Ireo ray aman-dreny rahateo tsy manana ny sahaza ampidirana azy ireo eny amin’ny sekoly tsy miankina.
Etsy an-kilany. aleon’ireo ray aman-dreny manan-katao mampiditra ny zanany any amin’ny sekoly tsy miankina satria any no azo antoka ny fahombiazana na dia lafo aza ny sarany. Indraindray tokoa mantsy dia zara raha mianatra hono eny amin’ny sekolim-panjakana.
Misy ihany koa ireo ray aman-dreny manomboka sahirana ka manosika mafyny zanany hianatra tsara mba ho voaray eny amin’ny sekolim-panjakana satria tsy ananana intsony ilay saram-pianarana naloa fahiny.
Raha tena mitsinjo ny zanaka Malagasy mantsy ny tsirairay dia tokony tsy andoavam-bola ny fanabeazana hatrany amin’ny ambaratonga fahatelo. Mampalahelo anefa fa hatrany ambanivohitra dia ny ray aman-dreny no asain’ny fanjakana manangana ny FRAM hahafahana mandoa ny tambin-karaman’ny mpampianatra satria lafo ny mpampianatra raiketin’ny fanjakana.
Mampalahelo ireo ankizy nanala CEPE ary niandrandra ny handranto fianarana eny amin’ny CEG kanefa tsy tafiditra satria vitsy ihany ireo mpianatra mendrika voasivana hiditra taona fahenina. Tonga izao ny fotoana tokony hananganan’ny fanjakana CEG sy lisea marobe manerana ny Nosy raha tena mitsinjo ny taranaka ankehitriny. Raha atao ny kajy tsotsotra dia tokony hitovy isa farafahakeliny ny isan’ny CEG sy lisea satria raha misy EPP 12 ao anatin’ny kaominina iray dia 1 ihany ny CEG ary tsy maintsy mandeha eny amin’ny renivohitry ny distrika vao afaka miakatra lisea.
Tadidio fa mandeha an-tongotra lavitra ireo mpianatra eny ambanivohitra rehefa hiazo CEG, ny sakafo anefa tsy zarizary ary ny fandriam-pahalemana tsy azo antoka firy. Sao mba famonoana ny zaza Malagasy ny tsy fisian’ny CEG sy lisea ? Mahonena ity fanabeazana !